दृष्टिकोण – Page4– News Of Nepal
यसोदा गैरे ग्रेट फल्स किताबका केही पेजहरु पढ्न बाँकी थिए । जेठको अन्तिम दिन सोमवार रातिको ९ बजे एक कप मरिच चिया बनाएर आज जसरी पनि सिध्याएर सुत्ने भनि पढ्दै थिएँ । एक्कासी बत्ती झ्याप्प गयो । वाइफाइ भने बिहानैदेखि जाने आउने गरिरहेकोले सोचेँ दिनभर पानी परेकोले केही भयो । अनि एक हप्ताअघि..
प्रतिमा सिलवाल २१ वर्षकी युवतीको मनमा जीवनका कस्ता परिकल्पना होलान् ! जीवनलाई सुन्दर बनाउन उत्कृष्ट पढाइ, राम्रो जागिर, व्यवसाय गर्ने शौख, आफू सुहाउँदो जीवन साथीको परिकल्पना । समग्रमा सुन्दर भविष्यको सपना । चन्द्रागिरीकी दीपिका श्रेष्ठ महर्जन पनि तीनै आम युवती मध्येकी एक हुन् । जोसँग २१ वर्षको..
नाम चाहिँ गणतन्त्र, तर सधैंको गनगन, सबैको गनगन ! अथवा गणतन्त्र होइन गनगन तन्त्र ! सत्तामा ढलिमली गर्नेको पनि गनगन । सत्ता नपाएर छटपटी भएकाहरुको पनि गनगन । कुर्सीमा गनगन । संविधानमा गनगन । संविधानको व्याख्या गर्नेको उस्तै गनगन । आफूलाई विज्ञ र जान्नेसुन्ने ठान्नेहरुको पनि गनगन । गनगनतन्त्र स्थापना..
-सुरेन्द्र काफ्ले घटनाक्रमले नेकपा एमाले मिल्न नसक्नुमा माधवकुमार नेपालकै अनिच्छा प्रमुख कारण देखिएको छ। एकताभन्दा पनि एमालेको ठुलो हिस्सा लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गर्ने वा छुटै पार्टी बनाएर जाने योजना देखिन्छ। गत फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र..
नेताले राजनीतिक निर्णय गर्न चुकेपछि
कृष्णमुरारी भण्डारी २०७७ चैतदेखि आक्रान्त बनाएको कोभिडले ०७८ वैशाखमा आफैँलाई आक्रान्त बनायो । तीन हप्ता घरमै थुनिदियो । आपmूमात्र होइन, पूरै परिवार । ढोकैमा आएर काल फर्किएझैँ भयो । अबको छ महिनाभित्र आम चुनाव हुँदैछ । पहिलो तीन महिना कोभिडविरुद्धको खोपमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र विपक्ष सबैको..
मिलन तिमिल्सिना कोरोना भगाउने र ज्यान जोगाउने उपाय पत्ता लाउन नसकेर तिरीमिरी झ्याइँ भएको सरकार र सरकार हाँक्ने दलका मान्छे अहिले अरुका आँखामा तोरीको फूल हालेर तिरीमिरी देखाउन व्यस्त छन् । सरकार अस्पतालमा शय्याको सट्टा आर्यघाटमा दाउरा थप्न तल्लिन छ । नागरिक श्वासप्रश्वासको खोजीमा छन् । तर, सरकार..
विपत्तिको समयमा मानिसको मन बढी नै चल्ने गर्छ । मन जति चलायो त्यति नै शरीरलाई गाह्रो हुन्छ । यस बेलामा शरीरका ज्ञानेन्द्रीय बढी नै सतर्क हुने गर्छन् । कति बेला के सुन्न पर्ने हो, के देख्न पर्ने हो र के भोग्न पर्ने हो भन्ने जस्ता भावनाहरु मानिसको मनमा बारम्बार आइरहन्छ । समस्या आउन बाँकी नै हुन्छ । त्यसलाई..
संगीता रेग्मी पौडेल देवकी भाउजू इट्टाको भारी बिसाएर ठेकेदारको आँखा छल्दै छोरालाई दुध पिलाउँछिन्, आँत रित्याउँछिन् । दुधले नपुग्लाकी भनेर आफूले खाँदै गरेको खाजा चपाएर चराले जस्तै गरी खुवाउँछिन् । छोराको अनुहार हेरेर उनमा नयाँ ऊर्जा पलाउँछ । आधा दिन इट्टा बोकेर थाकेको शरिरले फेरी चारवटा इट्टा थपेर..
मनाङेलाई मन्त्री बनाएर एमाले पार्टी र सरकारका नेताहरु आफैँ नाङ्गिए भनेर मान्छेहरु खिसीटिउरी गर्दैछन् । डनलाई किन मन्त्री बनाएको भनेर आलोचना गर्दैछन् । सरकारको सत्तोसराप गर्दैछन् । उछित्तो काढ्दैछन् । सरकारको विरोध मात्रै गर्न जानेकाहरु जाबो डन मन्त्री हुँदा पनि छटपटिन्छन् । विरोधमाथि विराेध..
रामप्रसाद आचार्य अप्रत्यासित राजनीतिक घटनाक्रमले यो वर्ष आम नेपालीले अपेक्षा गरेजस्तो फलदायी बन्न सकेन, उथलपुथलमै बित्यो । तैपनि थुप्रै अवरोध र प्रतिकूल अवस्थाबीच सरकारले मुुलुकलाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने गरी महìवपूर्ण भौतिक पूर्वाधार विकासको थालनी गरेको छ । मुलुकका सातै प्रदेशमा औद्योगिक..